Tsy fanjarian-tsakafo: manentana ny fikambanana “Hina” | NewsMada
Nanao hetsika maro, teto Toamasina, ny vondrom-pikambanana “Hina” (Hetsika iraisana natokana ho an’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo), notarihin’ny filohan’ny sampana Toamasina, Rtoa Zafitsara Maria. Natao tany amin’ny kaominina Fanandrana, ny alakamisy 17 septambra teo, ny fanentanana sy ny fampiofanana, nifantoka amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fampinonoan-dreny sy ny fampanarahana. Teo koa ny fiarovan-tena amin’ny Covid-19.
Nisy koa ny fampirantiana ny karazan-javamaniry fanao sakafo maroloko, ilaina tokoa amin’izao ady amin’ny Coronavirus izao. Nampirisihina ny mponina hamboly bebe kokoa. Nampahafantarina azy ireo ny fomba fitahirizana ny vokatra. Teo koa ny fomba fampinonoana ny ankizy hatramin’ny faharoa taony, tsy asiana fangarony hatramin’ny fahenim-bolana. “Tanjona ny hanana zaza tomady”, hoy ny mpandaha-teny.
Nanaitra ny mpandaha-teny ny nahitana ny mponina tsy manao arotava intsony, mandrora eran’ny lalana, mifampikasoka akaiky, …. Nampahatsiavin’ny vondrom-pikambanana Hina, noho izany, ireo fepetra ara-pahasalamana manoloana ny Covid-19.